R/wasaare Saacid oo maanta tegaya degmada uu kasoo jeedo. |
R/wasaare Saacid oo maanta tegaya degmada uu kasoo jeedo.
Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta waxa uu tegayaa degmada Caabuudwaaq ee gobalka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya kadib markii uu xalay uu ku hoydaay Magaalada Dhuusamareb ee xarunta gobalkaasi.
Xilligaan waxaa kasocda magaalada Caabuudwaaq iyada oo ay siigaareen ciidamo kasocda dowlada Soomaaliya oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada qalabka sida si ay u sii baaraan magaalada, amaankeedana u adkeeyaan.
Saacid ayaa taariikhda markii ugu horeysay ku hoyday meel caasimada Soomaliya ka baxsan tan iyo markii loo magacaabay R/wasaaraha dalka.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay waxa ay ka bedelneed sidii ay ahaan jirtay waayihii danbe maadaama R/wasaarihii dalka uu kusugnaa ciidamo badan oo isaga amaankiisa sugayana ay meel waliba tagnaayeen.